နည်းပညာဆိုင်ရာမန်နေဂျာများအဘို့ကို Global ကျွမ်းကျင်သင်ကြားရေးခေါင်းဆောင်မှု - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
နည်းပညာဆိုင်ရာမန်နေဂျာများအဘို့ကို Global ကျွမ်းကျင်သင်ကြားရေးခေါင်းဆောင်မှု
မတ်လ 14, 2019 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္ /by cre8or
2011 ကတည်းကနှစ်ကြိမ်နှစ်စဉ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု / ခေါင်းဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်နည်းပြဂျင်မ် Bagnola ကျင်းပကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ( "ComPro") ဘွဲ့ရ၏ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုဖို့ ", နည်းပညာဆိုင်ရာမန်နေဂျာများအဘို့ခေါင်းဆောင်မှု" နှစ်ပါတ်သင်တန်းဆုံးမသွန်သင်ထားသည် ကျောင်းသားများအတွက်။
ဒီသင်တန်းကိုမန်နေဂျာအဖြစ်နှင့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ဆက်ခံဘို့နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံ-based ချဉ်းကပ်ကမ်းလှမ်း။ သင်တန်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ tools တွေနဲ့နည်းပြ, လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools တွေကိုအချိန်-စမ်းသပ်ပြီးတုံ့ပြန်ချက် tools တွေကိုလေ့လာဖို့, ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ, ဆက်ဆံရေးဟာအဆောက်အဦ tools များနှင့်အပြည့်အဝစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလားအလာတွေ့ရှိနေရသည်များအတွက်အများဆုံးသိပ္ပံနည်းကျအတည်ပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပညာသော Transcendental Meditation® technique ကို, ကျင့်သုံးပါ။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒင်း Keith လေဝိ, ဖြည့်စွက် "ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်အလွန်ဒီသင်တန်းကိုခံစား။ ကျနော်တို့ဂျင်မ်သည်ငါတို့အဘို့မိမိအအလုပ်များအချိန်ဇယားထဲကနေအချိန်ထဲကယူရှိသည်ဖို့တကယ်ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။ သူဟာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကဤတူညီသောပစ္စည်းသင်ပေးတယ်။ "
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာရန်
32 နှစ်ကျော်အဘို့, ဂျင်မ် Bagnola သည်သူ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်ကြားရေးနှင့်အတိုင်ပင်ခံလှုပ်ရှားမှုများရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူစဉ်းစားတွေးခေါ်ကျန်းမာရေးအပေါ်ပုံစံများ, ပျော်ရွှင်မှုကို, အောင်မြင်မှုနှင့်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်စွမ်းရည်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ (သူ့အာရုံက Professional လူ့ခံဖြစ်လာခြင်းအပေါ်ဖြစ်တယ်, သူဟာအကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံးရေးသားခဲ့သည် စာအုပ် ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်။ )
ဂျင်မ်ရဲ့ client များပါဝင်သည်: ရှဲလ်ရေနံကုမ္ပဏီ, အဆိုပါ Kroger ကုမ္ပဏီ, အမေရိကန် Secret Service, လေတပ်ဦးစီးဌာန, Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်ဟိုတယ်, Siemens, Motorola, Scotiabank, PT ISPAT (အင်ဒိုနီးရှား), Hella (ရိုမေးနီးယား), Ecolab, Castle & ကှတျချ (ဟာဝိုင်ယီ) , Continental ကမော်တော်ကားနှင့်ဟီလ်တန်ဟိုတယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ အသေးစိတျအဘို့။
ဂျင်မ်ဘူခါရက်ဒတက္ကသိုလ် (ရိုမေးနီးယား) မှာလာရောက်လည်ပတ်ပါမောက္ခ, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ် (ယူအက်စ်အေ), Pontificia တက္ကသိုလ် Javierana (ကိုလံဘီယာ), Kent ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်နှင့်အနောက်တိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် mum မှာသင်ပေး?
သူကဒီမှာဆုံးမဩဝါဒပေးချစ်သောသူအဘယ်ကြောင့်ဟုမေးသောအခါ, ဂျင်မ်ငါကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုချစ်သောကြောင့်ငါ 101 နိုင်ငံများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ "ပြန်ဖြေတယ်။ mum ComPro သင်တန်းများကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးများဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ (ကနောက်ဆုံးအတန်းထဲတွင် 199 ကျောင်းသားများ) ရနိုင်အဖြစ် mum မှာဒီသင်တန်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အုပ်စုတစုနှငျ့အတူရှိ၏။ အဆိုပါသင်ယူမှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းအတန်းထဲတွင် 35 + ယဉ်ကျေးမှုများအကြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖလှယ်မှု။ ကျောင်းသားများလေ့လာသင်ယူချင်ကြတယ်။ "
ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုအဖြစ်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များသက်ဆိုင်သောကွောငျ့အမှန်ကတော့တိုင်း MSCS ကျောင်းသားဒီသင်တန်းကြာပါသည်။ သူတို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်နောက်ဆုံးမှာမန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါသည်, သူတို့အသိပညာနှင့်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ tools များလာပြီနေကြသည်။ ဒါဟာအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသင်တန်းပေးဖို့အချိန်၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းပံ့ပိုးနေကြသည်။
ဒါဟာပျော်စရာပါပဲ။ ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကအဆောက်အဦလေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်နှင့်သူတို့သင်တန်းကာလအတွင်းအသေးအဖွဲ့များအတွက်အများကြီးလည်ပတ်။ သူတို့ကအထောက်အကူနှင့်၎င်းတို့၏အလှူငွေတို့အတွက်ချီးကျူးနေကြသည်။ သူတို့ကအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဧည့်စပီကာသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဗီဒီယိုများဖှယျဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းသားများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသင်ယူပါ။ ကျောင်းသားများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုင်း 20 ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးလျှင်အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသင်ကြားရေးလက်ထောက် (TAs) ကပဲ့ထိန်းနေကြသည်။
သင်တန်း TAs (Brad Fregger) ၏အဖြစ်တဦးတည်းကကိုထည့်လေ့မရှိ, "ဂျင်မ်ကျောင်းသားများ '' ဦးခေါင်းကျော်ပြောသွားဘူး။ သူကပိုနေတဲ့ကထိကပါမောက္ခထက်သူတို့ကိုကူညီပေးနေမယ့်အကြိုက်ဆုံးဦးလေးနှင့်တူ၏။ ထို့အပြင်သူသည်အစဉ်မပြတ်အရေးကြီးသောအဖြစ်မိမိတို့၏စိတ်ကူးများ, ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းများတန်ဖိုးထားလေးမြတ်, ကျောင်းသားများပါဝငျသညျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျင်မ်ကလွယ်ကူလည်းပျော်စရာရှိခြင်းစဉ်ကျောင်းသားများ, ဝေဖန်အသိပညာရဖို့စေသည်ထားတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါ့ပေါ့လူတန်းစားလေထု, ဖန်တီးပေးပါတယ်။ "
ဒီသင်တန်းအတွက် mum ကျောင်းသားကောင်းကျိုးများ
အများစုမှာ ComPro ကျောင်းသားများကိုပြီးသားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူတို့ကအသိပညာဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကယဉ်ကျေးမှုအကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Transcendental တှေးတောဆငျခွများ၏အလေ့အကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်းဂျင်မ်ကထပ်ပြောသည်, "ဒါကငါဦးနှောက်၏စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေလမ်းရှိပါတယ်သတိထားမိပါတယ်တစ်ခုတည်းသောကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ TM အလိုအလျောက်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းဟာ့ဒ်ဝဲ- သာ. စွမ်းရည်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဦးနှောက်၏ Sculpt ဘို့ခွင့်ပြုဆက်လက်ထားတဲ့ကွက်တိဝင်နှင့်မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက် function ကိုမှတက်ရောက်စဉ်ဤတက္ကသိုလ်, ဦးနှောက်-added ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုင်တွယ်။ "
ဤတွင်အကြောင်းကိုရေးသားဖို့ကိုမေးမြန်းသည့်အခါကျောင်းသားများအထံမှအများအပြားရဲမှတ်ချက်များအနည်းငယ် "ကျွန်မဖြစ်ချင်ပါတယ်အဆိုပါခေါင်းဆောင်။ " များမှာ
Romie ဇော် (မြန်မာ)
"ငါသည်အမေရိကန်မှာလေ့လာခဲ့တဲ့အဆိုပါအလွန်ပထမနှင့်အကောင်းဆုံးအရာ Transcendental တှေးတောဆငျခွဖြစ်ပါတယ်။ ငါကဒီမှာလာသောအခါငါပါမောက္ခနှင့်အခြားသူများအတွက်သတိထားမိသောသော့ခပါဝင်ပစ္စည်းများတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မမှန်မှန် TM အလိုအလျောက်ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ငါတရားအားထုတ်ပြီးနောက်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်အချိန်အများစုကိုတွေ့ပါသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ "
"အသက်တာ၌ငါ၏အအဓိကရည်မှန်းချက်လိုအပ်၌နေသောလူမျိုးကိုအထောက်အကူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ MNC ကုမ္ပဏီများမှခန့်ခုနစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နဲ့ကျွန်မအများကြီးမန်နေဂျာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မအလုပ်လုပ်အသက်တာ၌ကောင်းတစ်ဦးဖှယျခေါင်းဆောင်မရှိခဲ့ဘူး။ '' ဂရိတ်ခေါင်းဆောင်များဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းငှါအလိုရှိကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစေခံရန်။ '' ကိုယ့်ဘာတစ်ခုမှခေါင်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာပါဘူးသူခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီသင်တန်းကိုတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဆကျဆံရေးနှင့်မည်သို့ထိရောက်သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုံအားနည်းချက်တွေကိုနှင့်အလေ့အထများကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုသင်ပေးတယ်။ ငါ TM အလိုအလျောက်၏အကူအညီဖြင့်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်ကြင်နာမှုနဲ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကိုရေးချင်ပါတယ်။ "
(အဲဂုတ်တုပွညျမှ) Abdelrady Tantawy
"အစဉ်မပြတ်ငါကတာဝန်ဝတ္တရားအများကြီးရှိခြင်းဆိုလိုသည်, ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အတိတ် 10 နှစ်များတွင်အရည်အချင်းမရှိတဲ့မန်နေဂျာများနှင့်မကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်များအများကြီးမြင်ကြပြီဖြစ်သောကြောင့်ငါမန်နေဂျာဖြစ်ချင်ကြဘူးထင်ပါပွီ။ သို့သော်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဤအကြောက်မက်ဘွယ်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျွန်မရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီး ငါသည်သူတို့၏နောက်လိုက်စိတ်အားသူတို့ကိုပိုပြီးအောင်မြင်ရန်နှင့်ယခုဘဝ၌၎င်းတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ကူညီပေးသည်သောသူတို့အားခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်လိုကြသည်။ ငါဒီလောကထိုကဲ့သို့သောခေါငျးဆောငျမြား၏နက်ရှိုင်းသောလိုအပ်နေကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။ "
"ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါင်းဆောင်မှုခေါင်းဆောင်နှင့်နောက်လိုက်များအကြားတစ်ဦးမိတ်ဖက်ကပြောပါတယ်သောမူအရယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့အလိုတော်အတိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလိုကျပါမညျသောအမှုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ "
"ကျွန်မလူတွေကိုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကဲ့သို့၎င်း, မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး, ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မျိုးဖြစ်လိုကြသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါခိုင်ခံ့အဖွဲ့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များနှင့်အတူလူလိုအပ်သည်ယုံကြည်သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မျှော်မှန်းချက်အရသိရသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးပါလိမ့်မယ်။ A ကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖွဲ့သည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့သဟဇာတဆောင်တတ်၏အဖွဲ့ဂရုစိုကျနှင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ဆောင်ခဲ့သောသူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။ ဤသူသည်ငါဖြစ်ပုံစံမျိုးရယူခေါင်းဆောင်များ၏ကြင်နာဖြစ်၏။ "
Mrudula Mukadam, mum မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒြေအဖွဲ့ဝင်မကြာသေးမီကခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအဘို့အ 10 သင်ကြားရေးလက်ထောက်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျင်မ်ရဲ့သင်တန်းအကြောင်းကိုမေးသောအခါသူမကပြုံးပြီးပြန်ဖြေတယ်, "ဒီသင်တန်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ပဲ! ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအဒီသင်တန်းကိုယူနိုင်အောင်ကံကောင်းများမှာ! "
သငျသညျလာမည့်နှစ်တွင်ဂျင်မ် Bagnola ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလူတန်းစားအတွက်ကံကောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်လိုပါကမကြာမီလျှောက်ထားပေးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာမျှော်လင့်နေပါတယ်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Jim-in-front-of-student-groups.jpg 671 1114 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2019-03-14 11:02:402019-03-14 11:17:30နည်းပညာဆိုင်ရာမန်နေဂျာများအဘို့ကို Global ကျွမ်းကျင်သင်ကြားရေးခေါင်းဆောင်မှု
သတင်းလွှာ sign up ပြုလုပ်ပါ:
နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ အဘူဒါဘီ အာဖဂန်နစ္စတန် အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမေရိကန်ဆာမိုအာ အင်ဒိုရာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အန်ဂွီလား အန္တာတိက ဂွါ & ဘာဘူဒါ အာဂျင်တီးနား အာမေးနီးယား Aruba (နက်။ ) ၾသစေတးလ် သြစတြီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် Azores (ဆိပ်ကမ်း။ ) ဘဟားမား ဘာရိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘာဘေးဒိုးစ ဘယ်လာရုစ် ဘယ်လ်ဂျီယမ် belize ဘီနင် ဘာမြူဒါ ဘူတန် ဘိုလီးဗီးယား ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့ဆွာနာ ဘရာဇီး British Virgin Islands ဘရူနိုင်း ဘူလ်ဂေးရီးယား Burkina Faso ဘူရွန်ဒီ ကမ္ဘောဒီးယား ကင်မရွန်း ကေနဒါ ကိပ်ဗာဒီ ကေမန်ကျွန်းစု ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ချဒ် ချီလီ တရုတ်နိုင်ငံ ခရစ္စမတ်ကျွန်း ကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများ ကိုလံဘီယာ ကော်မ္မရိုဇ့် ကွန်ဂို ကွတ်ကျွန်းစု ကော့စတာရီကာ ခရိုအေးရှား ကျူးဘား ဆိုက်ပရပ်စ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Dahomey / ဘီနင် ဒိန္းမတ္ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ အီရီထရီးယား အက်စ်တိုးနီးယား အီသီယိုးပီး ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု ဖရိုးကျွန်းစု ဖီဂျီ ဖင်လန် Fmr Yug ကိုယ်စားလှယ်မက်ဆီဒိုးနီးယား ပြင်သစ် ပြင်သစ်ဂီယာနာ ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်အန္တာတိကသည် gabon ဂမ်ဘီယာ Georgia ဂျာမနီ ဂါနာ ဂျီဘရောလ် ဂရိနိုင်ငံ ဂရင်းလန်း နေးဒါ Guadeloupe ဂူအမ်ကျွန်း ဂွာတီမာလာ ဂါဇီး ဂီနီနိုင်ငံ ဂီနီဘစ် ဂိုင်ယာနာ ဟေတီ ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟောင်ကောင် SAR ဟန်ဂေရီ အိုက်စလန် အိႏၵိယ အင်ဒိုနီးရှား အီရန် အီရတ် အီရတ်-ဆော်ဒီအာရေဗျကြားနေဇုန် အိုင်ယာလန် ဣသရလေ အီတလီ အိုင်ဗရီကို့စ် ဂျမေကာ ဂျပန် ဂျာစီ ယော်ဒန်မြစ် ကာဇက်စတန် ကင်ညာ ကီရီဘာတီ Korea Dem ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကူဝိတ် ကာဂျစ္စတန် လာအိုနိုင်ငံ လတ်ဗီးယား လေဗနုန်တော လီဆိုသို လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriy လီချင်စတိန်း လစ်သူ လူဇင်ဘတ် မကာအို မက်ဆီဒိုးနီးယား ဒါဂတ်စကာ မာလာဝီ မေလးရွား မော်လ်ဒိုက် မာလီ မော်လ်တာ မာရှယ်ကျွန်းစု မာတီနစ် Mauritania မောရစ်ရှ မက္ကစီကို မိုက်ခရိုနီးရှား, ဗဟိုဘဏ် Stat မော်လ်ဒိုဗာ, သမ္မတနိုင်ငံ မိုနာကို မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး မွန်ဆာရတ် မော်ရိုကို မိုဇမ်ဘစ် ျမန္မာႏုိင္ငံ နမီးဘီးယား Nauru နီပေါ နယ်သာလန် နယ်သာလန်အန်တီ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား နယူးဇီလန် နီကာရာဂွာ နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျီးရီးယား နီယူး Norfolk ကျွန်း မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ ေနာ္ေဝး အိုမန် ပါကစ္စတန် ပလောင်းကျွန်းစု ပနားမား ပနားမားတူးမြောင်းဇုန် ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါရာဂွေး ပီရူး ဖိလစ္ပုိင္ Pitcairn-ကျွန်းများ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ Puerto Rico ကာတာနိုင်ငံ ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း ရိုမေးနီးယား ရုရှားပြည်ထောင်စု ရဝမ်ဒါ စိန့်လူစီယာ စိန့်မာတင် ဆာမိုအာ ဆန်မာရီနို Sao Tome & Principe ဆော်ဒီအာရေဗျ senegal ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ seychelles ဆီယာရာလီယွန် စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆလိုဗက်ကီး ဆလိုဗေးနီး ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆိုမာလီယာ တောင်အာဖရိက စပိန် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ စိန့်ဟယ်လီနာ စိန့်ကစ် & နေးဗစ် စိန့်လူစီယာ စိန့်ဗင်းဆင့် & Grenadine ဆူဒန် ဆူရာနမ် ဆွာဇီလန် ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဆွစ်ဇလန် ဆီးရီးယားအာရပ် ထိုင်ဝမ် Tajikistan တန်ဇန်းနီးယား ထုိင္းႏုိင္ငံ တိုဂို Tonga ထရီနီဒက် & တိုဘာဂို တူနီးရှား ကြက်ဆင် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တူရကီထိုအကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများ Tuvalu အမေရိကန် Virgin Islands ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူကရိန်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥရုဂွေး ဥဇဘက် ဗာနူအာ ဗာတီကန်စီးတီး (သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုကြည့်ပါ) ဗင်နီဇွဲလား ဗီယက်နမ် ဗာဂျင်းကျွန်းစုများ - ဗြိတိသျှ အနောက်တိုင်းဆာဟာရ အနောက်ပိုင်းဆာမိုအာ ယီမင် ယူဂိုဆလားဗီးယား ဇိုင်ရီ ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ
ဘလော့ & သတင်းလွှာမော်ကွန်းတိုက်:
Google ကဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကျေးလက်ဒေသတရုတ်လယ်ယာအပေါ်ကြီးပြင်းသြဂုတ်လ 6, 2019 - 9: 09 ညနေ
mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ကျောင်းဆင်းများ၏စံချိန်အရေအတွက်ဇူလိုင်လ 12, 2019 - 3: 15 ညနေ
အဘယ်အရာကို ComPro ပညာရေးထူးခြားသောကို?မေလ 14, 2019 - 9: 15 ညနေ
နည်းပညာဆိုင်ရာမန်နေဂျာများအဘို့ကို Global ကျွမ်းကျင်သင်ကြားရေးခေါင်းဆောင်မှုမတ်လ 14, 2019 - 11: 02 နံနက်
ComPro အဆင့်လက်ခံရေး: ကျွန်ုပ်တို့၏ "မိသားစု" ကိုနယူးကျောင်းသားများကြိုဆိုခြင်းဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2019 - 5: 10 ညနေ
Bereket Babiso: mum မှာ ComPro ပညာရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်ဇန်နဝါရီလ 3, 2019 - 10: 35 ညနေ
SubscribeRSS Feed မှ
mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Dept.
ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါ 52557 ယူအက်စ်အေ
ယူအက်စ်အေ + 1 641-472-1153
quick Links များ:
လျှောက်လွှာ Links များ
© မူပိုင်ခွင့် - စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်, မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက် - ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များProgram℠ ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ
ComPro အဆင့်လက်ခံရေး: ကျွန်ုပ်တို့၏ "မိသားစု" ကိုနယူးကျောင်းသားများကြိုဆိုခြင်း အဘယ်အရာကို ComPro ပညာရေးထူးခြားသောကို?